ဘွန် ဂျိုဗီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘွန် ဂျိုဗီ (အင်္ဂလိပ်: Bon Jovi) သည် အမေရိကန် ရော့ခ် ဂီတတီးဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်၍ နယူးဂျာစီပြည်နယ် ၊ ဆာဗီလ်မြို့တွင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့တွင် အဆိုတော် ဂျွန် ဘွန်ဂျိုဗီ (Jon Bon Jovi) ၊ ကီးဘော့ဒ်သမား ဒေးဗစ် ဘရိုင်ယန်(David Bryan) ၊ ဒရမ်တီးခတ်သူ တီကို တော်ရက်စ်(Tico Torres) ၊ လိဒ်စ်ဂစ်တာ ဖစ်လက်ခ်စ် (Phil X) ၊ ဘေ့စ်ဂစ်တာ ဟျုး မက်ဒေါ်နယ်လ် (Hugh McDonald) တို့ပါဝင်သည်။  ယခင်ဘေ့စ်ဂစ်တာတီးခတ်သူ အဲလက် ဂျွန် ဆာ့ချ်ကို ၁၉၉၄ တွင်ထုတ်ပစ်ခဲ့၍ အကြာရှည်ဆုံးဂစ်တာသမား၊ တွဲဖက်သီချင်းရေးသူ ရစ်ချီ ဆမ်ဘိုရာသည် ၂၀၁၃တွင် ထွက်ခွာခဲ့၏။
၂၀၁၃ တွင်ဖျော်ဖြေနေသော ဘွန် ဂျိုဗီ၊ ဘယ်မှညာသို့ : ဖစ်လက်ခ်စ် ၊ ဟျုး မက်ဒေါ်နယ်လ် ၊ ဂျွန် ဘွန်ဂျိုဗီ ၊ တီကို တော်ရက်စ် ၊ ဒေးဗစ် ဘရိုင်ယန်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးဂျာစီပြည်နယ်၊ ဆာဗီလ်မြို့
၁၉၈၃ – လက်ရှိ
(ခေတ္တနားခြင်း : ၁၉၉၀–၁၉၉၁; ၁၉၉၇–၁၉၉၈)
၁၉၈၄-၈၅တွင် ဘွန် ဂျိုဗီအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ပထမဆုံး အခွေနှစ်ခွေကို ဖြန်ချိခဲ့ကာ ပွဲဦးထွက်သီချင်း အိမ်ပြေး (Runaway) သည် ထိပ်တန်းသီချင်း(၄၀)ကို ထိနိုင်ခဲ့သည်။ (အဆင့်(၃၉) ရ၏) ၁၉၈၆၌ တီးဝိုင်းသည် ပျံ့နှံ့စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီး တတိယအခွေ ရွှဲစိုတော့ ချော်ပေသည် (Slippery When Wet) အယ်လ်ဘမ်သည် သန်း(၂၀)ကျော် ရောင်းချခဲ့ရပြီး သုံးပုဒ်မှာ ထိပ်တန်း(၁၀)အတွင်းဝင်ခဲ့ကာ ထိုအထဲမှနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သော မင်းပေးလိုက်တဲ့ ချစ်ခြင်း နာမည်ဆိုး (You Give LoveaBad Name)၊ တောင်းဆုပြု၍ ရှင်သန်ခြင်း (Livin' onaPrayer) တို့သည် အဆင့်(၁)ရသော သီချင်းများဖြစ်ခဲ့၏။  စတုတ္ထမြောက် သီချင်းခွေ နယူးဂျာစီ (New Jersey) သည် ၁၉၈၈တွင် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့ကာ ဆယ်သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဟာ့ဒ် ရော့ခ် အခွေတစ်ခွေအတွက် စံချိန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ထိပ်တန်း(၁၀)ပုဒ်ထဲသို့ ငါးပုဒ်စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအထဲမှ နှစ်ပုဒ်သည် အဆင့်(၁)ရ၍ ထိုသီချင်းနှစ်ပုဒ်မှာ ဆေးခါး (Bad Medicine) နှင့် ကိုယ်အမြဲရှိနေပါ့မယ် (I'll Be There for You) တို့ဖြစ်သည်။ တီးဝိုင်းမှာ ၁၉၈၀နှစ်များအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပွဲခရီးစဉ်များထွက်ခြင်း၊ သီချင်းများသွင်းပြီးနောက် ၁၉၈၈-၉၀ နယူးဂျာစီ ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်တွင် အောင်မြင်မှုအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လာလျှက် ဂျွန် ဘွန် ဂျိုဗီ နှင့် ရစ်ချီ ဆမ်ဘရာ တို့သည် တစ်ကိုယ်တော်အခွေများကို ၁၉၉၀ နှင့် ၁၉၉၁တို့တွင် အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၂တွင် တီးဝိုင်သည် ယုံကြည်မှုကို ဆက်ထိန်းပါ (Keep the Faith)ဖြင့် ပလက်တီနမ်နှစ်ဆ အဆင့်ရခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမြဲတမ်း (always -၁၉၉၄ ) သီချင်းသည် ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှင့် ဇယားတွင် အကြာရှည်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာ၍ ဤနေ့ရက်များ (These Days -၁၉၉၅) တေးအယ်လ်ဘမ်သည် အမေရိကထက် ဥရောပတွင် ပိုမိုကြီးကျယ်အောင်မြင်ခဲ့ကာ ယူကေတွင် ထိုအခွေမှ သီချင်းလေးပုဒ်သည် ထိပ်တန်း(၁၀)ပုဒ်တွင်ပါဝင်ခဲ့၏။ တီးဝိုင်းသည် ဒုတိယအကြိမ် ခေတ္တအနားယူပြီး အရူးအမူးစွဲလန်း (Crush) ဆိုသည့် သက္ကရာဇ် (၂၀၀၀) အခွေမှ ဒါငါ့ဘဝ (It's My Life) သီချင်းသည် ငယ်ရွယ်သူပရိတ်သတ်များကို ဤတီးဝိုင်းနှင့် အောင်မြင်စွာ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ခုနှစ်၌ ပြန်ကန်ထွက်ခြင်း (Bounce) သီချင်းကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ပလက်တီနမ်အဆင့်ရသော ၂၀၀၅တွင် ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ (HaveaNice Day)အခွေ၊ ၂၀၀၇တွင် လမ်းပျောက်သွားသည့် အဝေးပြေးလမ်းမ (Lost Highway) အခွေတို့၌ ကန်ထရီးဂီတဟန် အခြင်းရာများကို ပေါင်းထည့်ထားကြောင်းတွေ့နိုင်ပေသည်။ ၂၀၀၆ခုနှစ်ထွက် သီချင်း မင်းလေးအိမ်ပြန်လို့မရဘူးလို့ ဘယ်သူတွေပြောလဲ (Who Says You Can't Go Home) သည် တီးဝိုင်းအား ဂရမ်မီဆု ဆွတ်ခူးရရှိစေခဲ့ကာ ရော့ခ်အဖွဲ့တစ်ခု၏ သီချင်းတစ်ပုဒ်အနေဖြင့် ကန်းထရီးဇယား၌ ထိပ်ဆုံးရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉၏ စက်ဝိုင်း(The Circle) တေးသီချင်းအခွေ ရော့ခ်သံစဉ်များပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၅-၀၆ HaveaNice Day ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်၊ ၂၀၀၇-၀၈ Lost Highway ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်နှစ်ခုလုံးတွင် အဖွဲ့၏ အောင်မြင်မှုများစွာကို တွေ့နိုင်၏။ ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်များ၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေရအများဆုံးသော ဂီတဖျော်ဖြေရေးပွဲများ (၂၀)တွင် ပါဝင်ခဲ့၍ ၂၀၁၃ခုနှစ်၏ Because We Can ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်သည် ၂၀၁၀နှစ်များ၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေအများဆုံးရရှိသော ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် များမကြာသေးမီကထွက်ထားသော အယ်လ်ဘမ်မှာ ဤအိမ်သည် ရောင်းရန်မဟုတ် (This House Is Not for Sale) ဖြစ်၍ ဤအခွေနှင့်ပတ်သက်သော ဖျော်ဖြေရေးခရီစဉ်များမှာ ၂၀၁၆-၁၉ ကို ခြုံငုံနိုင်ပါသည်။ စုစုပေါင်း စတူဒီယိုအခွေ (၁၄)ခွေ၊ သီချင်းများစုစည်းထုတ်ဝေသော အခွေ (၅)ခွေ၊ ပွဲအားတိုက်ရိုက် အသံသွင်းအခွေ (၃)ခွေ ထွက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းအား သန်း(၁၀၀)ကျော်ရောင်းချခဲ့ရသဖြင့် တေးသီချင်း/အခွေ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး ရော့ခ်ဂီတဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဖျော်ဖြေမှုပွဲပေါင်း ၂,၇၀၀ ကျော်ကို ပရိတ်သတ် (၃၄)သန်းအတွက် နိုင်ငံပေါင်း (၅၀)ကျော်၌ တင်ဆက်ခဲ့သည်။ ဘွန် ဂျိုဗီအဖွဲ့ကို ယူကေဂီတ ဂုဏ်ပြချီးမြောက်မှု (UK Music Hall of Fame) ကို ၂၀၀၆၌လည်းကောင်း ယူအက်စ် ရော့ခ်အန်ရိုးလ်ဂုဏ်ပြချီးမြောက်မှု (Rock and Roll Hall Of Fame) အား ၂၀၁၈တွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။  တီးဝိုင်သည် အမေရိကန်ဂီတဆု Award of Merit ဆုကို ၂၀၀၄၌၊ ဂျွန် ဘွန် ဂျိုဗီ နှင့် ရစ်ချီ ဆမ်ဘိုရာကို တေးရေးဆရာ ဂုဏ်ပြုချီးမြောက်မှု (Songwriters Hall of Fame) အား ၂၀၀၉တွင် အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြင့်ခဲ့လေသည်။
↑ Bon Jovi History။ Historyking.com။ 28 May 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ June 1, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whitewood၊ Alan (December 24, 2012)။ Bon Jovi Keep the Faith။ Island Pulse။ December 13, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ December 31, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Their first notable album was Slippery When Wet,aUSA No. 1 that stalled at No.6here in 1986. In all that album spawned four hit singles in the UK.”
↑ Coscarelli၊ Joe။ "Bon Jovi Leads 2018 Rock & Roll Hall of Fame Inductees: 'It's About Time'"၊ The New York Times၊ December 13, 2017။ December 13, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Weiss၊ Dan။ "Bon Jovi's 10 Best Songs: Critic's Picks"၊ Billboard၊ October 24, 2017။ December 13, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bon Jovi: When We Were Beautiful။ Top 40 Charts.com (April 6, 2009)။ June 1, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ McCall၊ Tris။ "Bon Jovi to play MetLife Stadium in July"၊ November 20, 2012။ March 21, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bon Jovi to enter UK Hall of Fame"၊ BBC News၊ British Broadcasting Corporation၊ October 16, 2006။ June 1, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bon Jovi honoured at American Music Awards – Music"၊ Smh.com.au၊ November 15, 2004။ March 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jon Bon Jovi Exhibit။ Songwriters Hall of Fame။ 18 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Richie Sambora Exhibit။ Songwriters Hall of Fame။ 14 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ March 20, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘွန်_ဂျိုဗီ&oldid=627426" မှ ရယူရန်
၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။